Jawaab ah Baaqii Faysal Cali Waraabe
Asalaamu Calykum W/W
Waxan jecelahayinaan jawaab ka siiya ninka la jidhaahdo Faysal Cali Waraabe iyo innta u u ololaysa (Jamhuuriya isku sheegta Somali-land ana u bixiyey) ama "CUQDAD MEEL YUURURTA".
Faysal Cali Waraaboow hadal dayn waydaye runta ayaan farta kuu saarayaa. Mudo aad u dheer ayaan arkayey qoraaladaada deelqaafku ka buuxo ee aad warbaahinta u gudbisid. Markaan arkay qoraaladaadaas waxa waajib noqotay inaan si qaawan kuula hadalo.
Taariikhda hadaynu dib ugu laabano laga bilaabo maalintii lagu qabtay shirkii Burco ee ay isugu yimaadeen beelaha gobolada Waqooyi oo ahayd 1991 waxaad adiga iyo dadka u ololeeya gooni isu taaga gobolada waqoooyi aad geed dheer iyo mid gaabanba u fuusheen inaad hoos keentaan Gobolada Sool,Sanaag & Cayn maamulkiina. Waxad ku guulaysan waydeen inaad magaalada Ceerigaabo Bari iyo Koonfuba dhaafi waydeen xaga kalena Caynaba soo dhaafi kari waydeen. Waxa idinkaga baxay kharash aad u badan inaad xukunkiina gaysaan gobolada Sool,Sanaag & Cayn,waxad soo kiraysateen caloosha u shaqaysayaal u dhashay degaanadaas kuwaas oo aad u magacawdeen Wasiiro,Xildhibaano anaguse aanu u naqaan "MACAANJECEL". kuwaas naga taagan halka ay idinka taagan yihiin Qaal C/raxmaan, Tuur, Jaamac Maxamed Qaalib, Buubaa,iyo Kaluun.
Faysaloow hadaynu nahay qabaa'ilka ku dhaqan waqooyiga reer walba waa la yaqaan ceelka reerkoodu ka cabo ama dooxooyinka geeloodu daaqo. Waxan kaloo kuu sheegayaa hadii Beesha Isaaq doorbiday iney Soomaaliya ka go'aan iyaga ayaa iska leh taladaas waana mid iyaga u taala. Hadaanse nahayn Beesha Harti go'aanka aad qabtaan 100% waanu ka soo hor jeednaa idikumana raacin idinkuna raaci mayno, "CALAACASHAAS OO TIMO KA SOO BAXAAN" ayay la mid tahay.
Waxanu ku cadaynay in aanan ka mid ahayn kana mid oqon doonin kuwa kala goynaya Soomaaliya. Tusaale waxan kuugu soo qaadayaa doorashayinkaad ku sheegteen in afti laga qaado umada waqooyiga,waad ku guul daraysateen inaad gaysaan Sool,Sanaag,&Cayn waxad soo kiraysateen qaar ka mid ah dadka u dhashay degaanka kuwaas oo aad Wasiir ku sheegtaan iyaga sanaadiiqdoodii way iman kari waayeen degaanadaas.
Doorashadii dawladaha hoose iyo tii doorashada madaxwaynahaba ceeb ayaa idinka raacday Sool,Sanaag, &Cayn Siilaano, Saleebaan-gaalba waxay ku andacoonayeen dalkoo dhan doorasho kama dhicin. Tusaaleyaashaas oo dhami waxay ku tusayaan inaan shacabka Hartigu aanu raali ka ahayn kala goynta Soomaaliya. Hadiise Beesha Isaaq ka maaranto umada Soomaaliyeed doonayaan iney ka go'aan Soomaaliya, anagu kama hor taagnin iney samaystaan dawlad "ISAAQ-LAND" la yidhaahdo.
Waxan jecelahay inaan akhristaasha qiimaha leh u sheego iney Somali-land tahan mid ku kooban Beesha Isaaq oo aanay beelaha kale la qabin. Hartiga Waqooyina aanu doonayn wax ka yar Soomalino uguna baaqayo walaalaha Soomaliyeed ee iskaga soo horjeeda dagaalka aan mabda'a lahayn inay ka waantoobaan,kana gubaan colaada furtaana baal cusub oo nabadeed.
Faysal Cali Waraabe wuxuu ku baaqayaa iney heshiiyaan Beelaha Hawiye wanaagsanaan lahaydaa haday niyad ka tahay,waxa la wada ogsoon yahay iney siyaasiinta Isaaqu aska dhaadhiciyeen inta xabada ka socoto Koonfurta iney u soo dhawaanayso aqoonsiga caaliga ahi iyo intay isku jeedaan Koonfurtu inaga ayay inaga sii jeedaan. Waxa kaloo ila xogogaal ah laga helay in dawladoodu ku bixiso lacag aad u fara badan si aan xabadu isga taagin Koonfurta Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho.
Faysal Cali Waraabe iyo inta la halmaashaa waxay ulo booca ugu tukubayaan iney colaad qabali ah ka soo cusbaato gobolada waqooyi,waxay ku hanjabaan iney sugi doonaan xuduudaha Somali-land ,su'aasha meesha taalaa waxa weeye umad aan doonayn iney ka mid noqoto waxa beesha Isaaq doonayso ma lagu khasbi karaa waxaanay doonayn?,Su'aasha akhristaha ayaan u daayey. Maanta qabiil walba oo Soomaliyeed isaga ayaa qaraar ka gaadhi kara masiirkiisa,kii doonaya inuu colaad kula noolaado jiiraankiisa iyo kii nabad goonayaba.
Mida gacan ku dhiiglayaasha mid ayaan ka leeyahay,Faysaloow madax meel ka saraysa oo la taabtaa miyay jirtaa? anigu hoos ugu dhaadhici maayo qolyaha maamulkiina waxanse carabka ku dhufanaya ninka Madaxwaynaha idiin ah Kornayl Daahir Riyaale oo haysan jirey NSS-ta Berbera markii dagaaladu ka socdeen gobolada Waqooyi. Waxan hadalkayga ku soo gebegabaynayaa intaad gacan ku dhiigle kaa fog raadinaysid inta hareera kaa xigta eeg imisa dhiigyacab ayaa Hargaysa kugula nool,waxan ku soo khatimayaa tixdan gaaban.
Asluub gabayga loo diid intaad ololinaysaan
Ana erayga eraygiisa waan kuu akhriyaaye u adkaysta waataad qufteen uuska baalide.
Hadii odayii tegey qabriga lagu adeecayo,ama axadba axdkii u dhalay cidi u aarayso.
Ma ilawday Suuslaba kanaa Aaabihii diley.
Gabayga dhuux wixii nuxur leh kala bax,inuu ku hareer marayo ayaanse u malaynayaa.
TAARIIKHDA LAGAMA BEEN SHEEGO....
Guddoomiyaha Gobolka Sool ayaa Sheegay
in Hay'adaha Qaramada Midoobey ay gobolka ka hawlgalaan iyagoo hoos yimaada Dowlad Goboleedka Puntland... Radio Lascaanod Aug 31